PSJTV | काठमाडौंमा भेट, दुनियाँलाई थ्रेट
‘चीनको कुनै पनि हिस्सालाई टुक्र्याउने कोसिस गर्ने जो–कोहीलाई पनि धुलोपिठो बनाइनेछ । त्यस्तो प्रयास गर्न उक्साउने कुनै पनि बाह्य शक्तिको दिवा सपनालाई चिनियाँ जनताले चकनाचुर पार्नेछन् ।’
काठमाडौं : अंग्रेजीबाट हुबहु अनुवाद गर्दा अर्थ झन् भयानक छ । उनले चीनलाई विभाजित गर्न खोज्ने जोसुकैको शरीर चटनी र हड्डी धुलो बनाउने चेतावनी दिएका छन् । चीनको सरकारी टेलिभिजन सिजिटिएनले उनको भनाइ अंग्रेजीमा यस्तो राखेको छ, “Anyone attempting to split China in any part of the country will end in crushed bodies and shattered bones. And any external forces backing such attempts dividing China will be deemed by the Chinese people as pipe-dreaming!”
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको वार्तामा व्यक्त गरेको विचार संसारभर छरिएको छ । भ्रमणको दोस्रो दिन आइतबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भेटवार्ता भएको थियो । तिब्बत, ताइवान, हङकङ र सिनज्यान विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको चासोबारे सीले ओलीसँग चर्चा गरेका थिए । तर, त्यस्तो चासो चीनका लागि असह्य हुने उनको भनाइ थियो । ओलीसँग भेटमा सीको भनाइ थियो, ‘चीनको कुनै पनि हिस्सालाई टुक्र्याउने कोसिस गर्ने जो–कोहीलाई पनि धुलोपिठो बनाइनेछ । त्यस्तो प्रयास गर्न उक्साउने कुनै पनि बाह्य शक्तिको दिवा सपनालाई चिनियाँ जनताले चकनाचुर पार्नेछन् ।’
यो चेतावनी सीले ओलीलाई होइन, दुनियाँलाई सुनाउन खोजेका थिए । त्यसैले ओलीसँग सीले व्यक्त गरेको विचार भन्दै यो भनाइ पहिलोपटक चीनको सरकारी टेलिभिजन चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क ९सिजिटिएन०ले सार्वजनिक गरेको थियो । लगत्तै, यो समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको मुख्य हेडलाइन बनेको छ । यसबारेमा समाचार प्रकाशित गर्ने सबैजसो अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले मुख्यतः हङकङका प्रदर्शनकारी र त्यसलाई सघाउने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई लक्षित गरेर सीको यो चेतावनी आएको टिप्पणी गरेका छन् । तिब्बत, ताइवान र सिनज्यान पनि यही प्रसंगमा जोडिएको छ ।
सिएनएनले सीको चेतावनीको खबर लेख्दै सोही दिन हङकङको प्रदर्शन १९औँ सातामा प्रवेश गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘सीले आफ्नो टिप्पणीमा स्पष्ट रूपमा हङकङको नाम त लिएनन्, तर प्रयोग गरेको ‘टुक्र्याउने’ र ‘विदेशी शक्ति’ पदावलीले हङकङको प्रदर्शनलाई जनाउँछ । हङकङ प्रसंगमा बेइजिङले विगतमा पनि यस्ता शब्दावली प्रयोग गरेको थियो ।’
बिबिसीले लेखेको छ, ‘सीले हालसम्म हङकङकमा जारी प्रदर्शनबारे सीधै टिप्पणी गरेका छैनन् । त्यसैले उनकोे यो टिप्पणीलाई असाधारण र कठोर चेतावनीका रूपमा हेरिनेछ ।’
अल जजिराले सीको भनाइको पृष्ठभूमिसहितको विवरण प्रस्तुत गरेको छ, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हङकङमा जारी प्रदर्शनमा केही नराम्रै भएमा चीनसँगको व्यापार वार्ता जारी राख्न गाह्रो हुने बताएका छन् । व्यापार युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा शनिबार ट्रम्प र चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री लिउ हेबीच अमेरिकामा वार्ता भएको थियो । तर, वार्तामा ट्रम्पले हङकङ मुद्दा उठाएका थिए । त्यसैले बाह्य शक्ति भनेर सीले अमेरिकालाई लक्षित गरेका हुन सक्छन् । किनकि अमेरिकी राष्ट्रपति र चिनिया“ उपप्रधानमन्त्रीबीच अमेरिकामा वार्ता भएको अर्को दिन सीले काठमाडौंमा यस्तो चेतावनी दिएका छन् ।’
हङकङबाट प्रकाशित हुने साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले हङकङ प्रदर्शनमा अमेरिकी संसद्को सक्रियतालाई पनि समाचारमा जोडेको छ । सो दैनिक लेख्छ, ‘यही साता अमेरिकी संसद्मा हङकङ मानवअधिकार तथा प्रजातन्त्रसम्बन्धी विधेयकमा मतदान हुँदै छ । सो विधेयक पास भएमा हङकङमा भएको प्रदर्शनमाथि दमन गर्ने अधिकारीमाथि अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउन बाटो खुल्नेछ । सोमबार हङकङमा एक लाखभन्दा बढी प्रदर्शनकारीले सो विधेयक पास गराउन अमेरिकालाई अनुरोध गर्दै र्‍याली निकाले । चीनले भने यस विधेयकलाई आफ्नो देशको सार्वभौमिकतामाथि प्रहार भनेको छ ।’
समाचार एजेन्सी रोयटर्सले ‘उत्तर–पश्चिम चीनका मुस्लिम समुदाय उयिगुरप्रति चीनले गरेको दमनप्रति अमेरिकाले विभिन्न समय चीनको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । सीको भनाइ त्यता पनि लक्षित हुन सक्छ ।’
बिबिसी हिन्दीले नेपालमा गतिविधि गर्ने तिब्बती अभियानकर्तामाथि पनि सीको भनाइ लक्षित हुन सक्ने बताएको छ । उसले लेखेको छ, ‘चिनिया“ राष्ट्रपतिको कडा चेतावनीलाई कैयौँ सन्दर्भमा हेरिँदै छ । स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा नेपालमा सक्रिय केही तिब्बती अभियन्ता सीको भ्रमणकै वेला पनि विरोधको प्रयासमा थिए । सीको भनाइलाई योसँग पनि जोडेर हेर्न सकिन्छ ।’
किन भइरहेछ हङकङमा प्रदर्शन ?
हङकङमा अपराध गरेको अभियोग लागेकालाई मूलभूमि चीन सुपुर्द गर्न सकिने कानुन प्रस्ताव भएपछि प्रदर्शन सुरु भएको हो । तर, यो विधेयकमाथि हङकङको विधायिकामा छलफल भएन, बरु विधेयक नै फिर्ता भयो, तर प्रदर्शन साम्य भएको छैन । प्रदर्शन १९औँ साता प्रवेश गरिसक्दा पनि प्रदर्शनकारीको संख्या घटेको छैन ।
प्रदर्शनकारी अहिले हङकङमा पूर्ण प्रजातन्त्रको बहाली हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् । यसअन्तर्गत हङकङको प्रमुखको चयन आमनिर्वाचनबाट हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । अझ प्रदर्शनकारीको एक हिस्साले हङकङलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने माग राख्न थालेको छ । त्यस्तै अर्को सानो समूहले त हङकङलाई पूर्वऔपनिवेशिक शक्ति बेलायत मातहत फर्काउनुपर्ने मागसमेत राखेको छ ।
यसले बेइजिङलाई झस्काएको छ । सन् १९९७ मा पूर्वऔपनिवशिक शक्ति बेलायतबाट फिर्ता भएको हङकङ ‘एक देश, दुई प्रणाली’अन्तर्गत चिनियाँ सार्वभौमिकताभित्र पर्छ । हस्तान्तरणको समयमा गरिएको सम्झौताअनुरूप चीनले सन् २०४७ सम्म हङकङमा पूर्ण स्वशासनको अधिकार प्रदान गर्नेछ । यो अधिकार हङकङको संविधान मानिने ‘बेसिक ल’ले नै प्रत्याभूत गरेको छ । प्रदर्शनकारीको मुख्य माग पूरा भइसक्दा पनि प्रदर्शन जारी रहनु र ‘बेसिक ल’ले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्थाभन्दा अघि गएर थप प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको समेत माग हुनुमा बेइजिङले विदेशी शक्तिको भूमिका देखेको छ । बेइजिङका महत्वपूर्ण ओहदामा रहेका विभिन्न अधिकारीले यस विषयमा पटक–पटक खुलेरै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । खासगरी अमेरिका र बेलायतको भूमिकाप्रति चीन सशंकित र असन्तुष्ट छ ।
तिब्बत, ताइवान र हङकङबारे काठमाडौंमा सीको खरो प्रस्तुति
काठमाडौंमा भएका भेटघाटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले एक चीननीतिको विषयमा आफ्नो खरो नीति प्रस्तुत गरेका थिए । सत्तारुढ नेकपाको नेतृत्वपंक्तिसँग भएको भेटमा उनले तिब्बत, ताइवान, हङकङको विषयमा जोड दिएर आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
नेकपा सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सीको भनाइ यस्तो थियो :
तिब्बतः तिब्बत हाम्रो आन्तरिक मामिला हो । हाम्रो देशको रक्षा कसरी गर्ने भन्नेमा हामी आफैँ स्पष्ट छौँ । हो, तिब्बतलाई लिएर पश्चिमा शक्तिहरूले विभिन्न ढंगले विषय उठाएका छन् । मानवअधिकारको बहानामा हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास हामी सहन्नौँ ।
ताइवानः चिनियाँ क्रान्ति उत्कर्षमा पुग्दा हाम्रो धनमाल बोकेर केही भगौडा ताइवान पुगेका थिए, तर त्यसअघि र त्यसपछि पनि ताइवान चीनको अभिन्न अंग हो । संवाद वा बल जे आवश्यक पर्छ, त्यो प्रयोग गरेर हामी ताइवानलाई चीनसँग जोड्छौँ ।
हङकङ स् हङकङमा भएको आन्दोलन पानीको फोका हो । पश्चिमाहरूको उक्साहटमा यो सब भइरहेको छ । चीनलाई अस्थिर बनाउन पश्चिमाहरू आफ्नो ढंगबाट कोसिस गरिराखेका छन् । तर, हाम्रो आफ्नै नीति, आफ्नै मार्ग र आफ्नै सिद्धान्त छ, त्यसमा हामी दृढ छौँ । कुनै पनि हस्तक्षेप हामी सहन्नौँ, उचित जवाफ दिन तयार छौँ । तर, भेटमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल आफ्नो सार्वभौमिकता र अखण्डताको विषयमा चीनले राख्दै आएको धारणा नै सीले आफूहरूसँग पनि राखेको बताउँछन् । ‘हङकङको प्रदर्शन होस् वा ताइवान र तिब्बत, ती सबै चीनका आन्तरिक मामिला हुन्, त्यसको सामना आफ्नै सिद्धान्तका आधारमा गर्छौँ भन्ने उहाँको भनाइ थियो,’ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।